ဥုံး တီး ဝမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဥုံး တီး ဝမ်း
ဥုံး တီး ဝမ်း
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Mar 1, 2013 in Creative Writing | 16 comments
ရာသီက တယ်လည်း ပူလှတယ် …
ဒါကို အပြစ်တော့ မဆိုချင်ပါဘူးကွယ် …
ပူချင် ပူမယ်၊ အေးချင် အေးမယ် …
ဒါ ဘယ်လိုများ ပြောလို့ရနိုင်မှာလဲကွယ် …
အင်း …. ဒီတော့ ….
ပူတဲ့ အခါလည်း ပူသင့်ပါတယ်ပေါ့ ……။
လ ကို ထိုးထိုးပြီး ဟောင်နေတယ် ..
အတော် ကြောင်တောင်တောင် နိုင်တာပဲ …
ပြီးတော့ … အဲ့ဒီ ခွေးပေါ့ ..
ငါ ရေကူးတတ်တယ် ဆိုပြီးတော့ …
သူ့ကိုယ်သူ ပစ်ချလိုက်တယ် ….
အစ ကတော့ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့
နောက်တော့ နစ် သေတာပဲ …
ဒီလောက် ရူးမိုက်တဲ့ကောင် နည်းတောင်နည်းသေး ….။
ဒါ … အရသာ ရှိအောင် ဖျော်ပါတဲ့ ….
ဒီကလည်း ဖျော်ပေးလိုက်တာပေါ့ …
အရသာ က ချိုရဲရဲ နဲ့ …
ဘယ်လို သောက်လို့တော့ ကောင်းမှာတဲ့လဲ …
ဘဝမှာလည်း တစ်ခါတစ်ခါ ဒီလိုပဲ …..။
ဇာတ်လမ်းကောင်းတုန်းတော့ မဟုတ်ဘူး …
စာရေးလို့ ကောင်းနေတုန်း မီးပြတ်သွားတာ …
ရေလည် တင်းဖို့ ကောင်းသဗျာ …
ဒါနဲ့ မရေးတော့ဘူးဆိုပြီး ထိုးအိပ် …
မနက်ရောက်လို့ ပြန်ဆက်ရေးဖို့ လုပ်တော့
ညက ဖီလင်မျိုး ပြန်မရတော့ …
တို့လို့တန်းလန်း စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပေါ့ …..။
အချို့များ ပြောကြသေးတယ် …
ရှေ့ကြည့် ရင်ဘတ် ..
နောက်ကြည့် ကျောပဲ … တဲ့ …
ကိုင်း .. ကိုင်း … ရှိစေတော့ ..
ကျုပ် ဘာမှ ထပ်ပြီး မပြောလိုတော့ဘူး …
ခင်ဗျားတို့ကို မေး မငေါ့ပါဘူး …
ကျုပ်လည်း ဘာမှ မထူးဘူး …
ခု တစ်ယောက်တည်းပဲ ……..။
ဘဝ ဆိုတာ ဂလို ပါပဲလေ။
သူများပေးတဲ့ ဒုက္ခ ယူစရာလိုဘူး။
တီယောက်ထဲ နေနေဒါဘဲ .. ဟီးဟီး ..
ပထမဆုံး အားပေးသွားတဲ့ နာ့ မမဂျီး မခိုင်ဇာ ကို ကျေးကျေး အားဂျီးဘာ ..
မကြေနပ်ရင် ရွာထိပ်က ထန်းတောလိုက်ခဲ့..ဒါဗျဲ :harr:
ခညား စောစောစီးစီးဂျာ ..
လူကျားလို့မှ မကောင်း ..
ထန်းတော လိုက်ခဲ့ …… ဒဲ့ …
လိုက်ဝူးးဂျာ .. ညနေမှပေါ့လို့ ..
( ခွေးတစ်ကောင် …
အတော် ကြောင်တောင်တောင် နိုင်တာပဲ …)
မိုက်ဒလယ်ကွာ.. ဒါမျိုး ဘာမှန်းမသိတာမှ ခံဇားလို့ရတာ…
ဟယ် ကိုရွှေတင်မောင်ရယ် ကြုံတုန်းအတင်းပြောရအုံးမယ် သိလား ဒီရွာထဲကလေ အံချာတုံးဆိုတဲ့လူကလည်း မိန်းမမရရှာလို့ လူတွေနားမလည်တဲ့ ကဗျာတွေ ရေးတတ်တယ်သိလား အိုက်လူကြီးအခုတောထွက်တာလိုလို တောခိုသွားတာလိုလိုနဲ့ ပျောက်သွားတယ်တော့ ကွမ်းဖိုးအကြွေးတွေလည်း ပေးမသွားဘူးဆိုလား သူနဲ့များတွေ့ရင် ယောင်ပြီးမခေါ်လိုက်နဲ့နော် ပိုက်ဆံချေးရင်ချေး မချေးရင် ညီမရှိသလား အမရှိသလားနဲ့ အငမ်းမရမေးတော့တာ သိလား စေတနာနဲ့ပြောတာပါ ကိုရွှေတင်မောင်လည်းမန်းလေးလာရင် အလည်ဝင်ခဲ့ပါနော မိဗုံကပြောတယ်လို့ ပြန်မပြောနဲ့နော် သူနဲ့တည့်ဘူးရယ် :harr: :harr:
လူ့ပြည်က မန်းလေးမြို့လယ်က မြေတစ်ကွက်လောက်တော့ ဆွဲခဲ့ပါ။
အုံးတီးဝမ်း ( အုံးတီး ကို ဗြောင်းဗြန်လှန်ယူ)
ဪတယောက်ထဲဖြစ်ကြောင်းကြော်ငြာဝင်နေတာကိုး ရွာထဲမှာကလဲ အကြိုဂျီးတွေကလဲများတယ်ဆိုဒေါ့လဲ မောင်အံရေ မန်ဂလာဆောင်ရင်ဖိတ်လိုက်ကွယ်
အော်……. ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ ကဗျာ မှာ မော်ဒန် ဟာနားလည်ရစကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်သလို လောကမှာ ဘ၀ဆိုတာလဲ နားမည်ရ စကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပေဘူးပဲလို့ ဘယ်သူလဲမသိပြောသွားတာ မှတ်ထားခဲ့ခူးပါရဲ့ သူများပြောတာတွေချည့်လိုက်မှတ်နေရတာဆိုတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ် မမှတ်မိတာခွေးလွတ်ပါ ရွှေမန်းတင်မောင်ရေ………..
အားပေး ဖတ်ရှုသွားကြသူ အပေါင်းကို
ဘေးဘယာတွေ ရှောင်းစေဂျောင်း ဆုတောင်းလျှက် …
မေတ္တာ အသင်္ချာ ပို့သပါဂျောင်းးးး
မောင်အံစာ .. အဲ .. အဲလေ … ရွှေတင်မောင် လို့ ကြောဒါဘာရို့ …
ဂီဂျာလေးထဲမှာ အဲ့ဂီစာသားလေးဒွေ မရှင်းလို့ဗါ… ဘကြီးရွှေတင်မောင်…………..
ရွှေတင်မောင်ဒဲ့နံမယ်ဂိုဂ ခေါ်ရတာတန်ဖိုးရှိလိုက်တာ နောက်တစ်ခါဆိုရင်
လျှောက် ဆဲ နေတာ
တစ်ခုခုများ ထူးမလား ..လို့…